Geerisa: Dad Looga Shakiyey Inay Ku Sumoobeen Cunto Gawaadhi Looga Daadiyay | Somaliland Today
← AWDAL: Qoys Xoollo Dhaqato Ahaa Oo Ku Caydhoobay 24 Saacadood Gudahood
Xukuumadda Oo Ballan Ku Qaadey In Qof Aan Haysan Kaadhka Dhalashadu Aanu Ka Shaqeysan Karin Somaliland →
Geerisa: Dad Looga Shakiyey Inay Ku Sumoobeen Cunto Gawaadhi Looga Daadiyay
(SLT-Geerisa)- Deegaamada u dhexeeya Gobolada Awdal iyo Selel, ayaa sheegaya inay Carruur yar iyo dad kale oo waayeel ah waxyeelo caafimaad ka soo gaadhay Sharaab iyo cuntooyin kale oo lagu daadiyay Banka Geerisa iyo meelo kale oo ay cunneen.
Dadka gawaadhida wata ee Reer Magaalka ah ayaa inta badan waxay dadka xoolaha la jooga u tuuraan Biyo, sharaab iyo waxyaabaha kale ee ay gacanta ku sii qaataan markay magaallooyinka ka baxayaan.
Waxaana u badan cuntooyinkaasi kuwa dareeraha ah ee fudud, sida Caanaha, Sharaabka aan Soodhaha lahayn iyo waxyaabaha kale ee weelka leh.
Sidaasoo ka dhacda Deegaamada waddooyinku maraan, hadana dhacdadan dadka ku wax yeeloobay waxa looga shakisanyahay inay cunto sumaysan loo tuuray.
Mid ka ka mid ah Waxgaradka Deegaamadaas ayaa Wargeyskan u sheegay in Shuban iyo Hunqaaco, ay dadkaasi kala joojin waayeen markii ay cabbeen cuntooyinkan, isla qaarkood loola cararay dalka Djibouti oo si xaaladdooda caafimaad loola tacaalo.
Sarkaal hore dawladda u shaqayn jiray, ayaa isna sheegay in Raashinkan ay dadku ku sumoobeen, ay u daadiyeen Gawaadhi ka tagtay Boorama oo Saylac ku socday, waxaanu intaas ku daray inaanay ilaa hada laamaha nabad-gelyada iyo kuwa adeegyada aasaasiga ahi wax talaabo ah oo dhacdadan lagu baadhayo qaadin.
“waxa naloo soo sheegay in carruur iyo dad kale oo waayeel ahiba ku sunnoobeen Sharaab iyo Buskut loogu daadiyay banka oo ay cunneen”, ayuu yidhi Sarkaalkan oo ka cudur daartay inaan magaciisa soo xigano balse ka mid ah dadka deegaankaas ka soo jeeda.
Waxaa uu intaas ku daray “Dadkii qaarbaa jabuuti loo qaaday, qaarna wali way jiifaan.” Ayuu hadalkiisa raaciyay. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Maamulka Dawladda ee heer Gobolka iyo mid deegaan toona oo dhacdadan looga hadlayo.